BASELWORLD 2018 - Raaxo leh inaad ku safarto Adeegga Bedelka Basel -
Dayr kasta waa Basel ciidankii in ka badan 1800 shirkadaha bandhigaaya watch iyo Schmuckreationen at Baselworld. About tirada soo booqda, qabanqaabiyeyaasha bandhig muhiimka ah waa in aan ka caban, maxaa yeelay, sida sannad kasta, jumladlayaasha waxaa la filayaa at Watch Adduunka iyo dahabka muddo ka badan dukaamada iyo wakiilada 2017 100.000. 22 March March 2018 albaabbada carwadu waxay u furan tahay socodka booqdayaasha.
Si fudud ugu gudub BASELWORD - Basel Adeeg Baska
EuroAirport Basel waa dhowr daqiiqo oo kaliya baabuur laga soo qaaday xarunta bandhigga. Laakiin aad hubaal tahay inaad rabto - sida safarro badan oo kale oo ganacsi - in ay soo booqdaan bandhigga bandhigga maalmo badan. Mar labaad iyo mar kale rakaabkayaga ayaa noo sheegaya in wadahadalka iyo wada-xaajoodyada ay la leeyihiin kuwa wax soo saara, aragtiyo badan oo cusub iyo lugaha ayadoo loo marayo hoolalka bandhigga ayaa ah maalmaha ugu walaacsan sanadka ganacsiga. Taasi waa sababta aan u bixineyno adeeg gaar ah oo loogu talagalay wakhtiga Baselworld.
Qalab soo jiidasho leh waxaad u imaaneysaa si habboon oo ammaan ah hudheelkaaga ama si toos ah uga soo dagaya garoonka diyaaradaha ee Basel ilaa ballamahaaga. Waxay ku safraan qaab First Class limousine Naqshad Jarmal ahna uma baahna inay ka walwalaan gaadiidka culus ama raqiis gaaban ee xarunta bandhigga. Waxaan nahay ee soo socota si ay waqtiga iyo xushmad rakaabka naga saartay oo sidaas daraaddeed mid ah ganacsatada sidaas oo caan ah, sababtoo ah waxaan ku bixin in ay go'aankeeda ugu badnaan dareenka halka baabuur-wadidda.
Adeegga bedelka Basel ee dukaanka internetka fudud
Waan ognahay - wakhtigu waa lacag. Taasina waa sababta aan kuu heysano qalab jaale Online goglan. In hal waqti saacad hogaanka aynu halkaa kuu yihiin sida limousine gaar ah iyo dareewal diyaar ka hor inta aadan xareyn hotel ama garoonka diyaaradaha ee aaga imaanshaha iyo bixitaanka.
Kooxda Basel ee Basel waxay dooneysaa inaad joogteyn ku leedahay Baselworld iyo marwalba ganacsi wanaagsan
Waxaa lagu calaamadeeyay: Gaadiidka garoonka Baselworld Wareejinta madaarka Bedelka Ganacsiga Ganacsiga Adeegga wareejinta
taxi.flughafen Maarso 16, 2017 November 18, 2017 Basel, garoonka Shuttle, adeegga limousine Faahfaahin la'aan
← 360 ° Adeegga bedelka martida martida ee Basel
BASELWORLD 2018 - Safar raaxo leh Basel Adeeg Basel →